Afrikaan.so | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 26
Kusoo dhawaada barnaamijkeenii xiisaha badnaa ee cunta karinta ee aad kalla socotaan Machadka AJ. Maanta waxaanu karini doonaa Shaah. Jalmad mise ibriiq ama kirli hadba sidda aad u taqaanaan. Markii aad shaah karinayso waxaad u baahantahay: Kirli ama jalmad mise ibriiq sidda aad u wada taqanaan. Sonkor Caleen Qorfo hayl iyo dhaga yaro Iyo halkii aad ku karsani laheed (dam) Marka horre jalmada ayaad dhaqeysaa oo aad nadiif kadhigeysaa. Sidda aan wada ogsoonahay nadaafadda waa shey qaali ah, marwalbana ku dadaal siddii aad u nadiifsani laheed allaabta aad wax ku cunayso. Markaad jalmada dhaqdo waxaad ku shubeysaa 6 galaas oo …
Kusoo dhawaada waa markalle iyo barnaamijkii cunta karinta ee aad kalla socotaan Machadka afkaarta Joogtada Ee Ganacsiga Iyo Bulshada. Maanta waxaan karinaynaa bariis isku karis ah, waxaan isticmaaleynaa bariiska loo yaqaano bariis mati. Marka horre waxaa lagu bilaabayaa dhaqidda bariiska. Waa inaad dhaq-daan bariiska illaa ay biyaha saafi ka noq-daan. Dhaq illaa 3 daqiiqo ama 4 daqiiqo. Bariiska illaa 1 saac la dhig biyo. Waxaa kalle oo aan isticmaaleynaa hilib ari. Dadka qaar ayaa isticmaallo fiyinjeer, haddii aad isticmaalayso fiyinjeer waxaad sameysaa si fiican iskeega dhaq hilibka, barafka kaga dhaq biyo kulul si nadiif u noqoto cuntadaada. Intaas kadib waxaad …
Assalaamu Calaykum! kusoo dhawaada barnaamijkii cunta karinta. Maanta waxaan barani doonaa sidda ama qaabka loo kariyo shaaha. Sidda aan wada ogsoonahay marwalbo waxaa wanaagsan inaad ku noolaato jawi nadaafadiisa ay wanaagsantahay, qaasatan weelasha ama allaabta aad wax ku cunayso mise aad wax ku karsanayso. Shaqsiyaadka caalamka wax yaabaha ay u kalla duwanyihiin waxaa ka mid ah xagga nadaafadda, hadaba aan ku dadaalno siddii aan ugu noolaani laheen jawi nadaafad leh. Qodobadaan hoos ku qoran waxay kuu tilmaamayaan sidda loo sameysto shaah fiican oo soo jiidasho wanaagsan leh. Hadaba waligaa shaah ma sameysatay? Sidduu ahaa qaabka aad u sameysatay? Marka horre …
Assalamu Caleykum waa barnaamijka cunta karinta. Maanta waxaan sameyni doonaa muufo Soomaali oo macaan, Insha Allah. Sidda aan wada ogsoonahay marwalbo waxaa muhiimsan in gacamaha la iska dhaqo, iyadoo la isticmaalaayo saabuunta gacmaha ama waxyaabaha kalle ee loogu talla sagalay in gacmaha lagu nadiifiyo. Waxaan ka wada marqaati nahay in nadaafada ay tahay shey qaaali ah. Marka horre sidda caadiga ahayd waxaad soo diyaarsanaysaa dhammaan allaabtii aad wax ku karsani laheed iyadoo nadiif kuu ah. Hadda waxaan u diyaar garoweynaa qaabka loo sameeyo muufada, marka horre: Waxaad kululeysaneysaa 3 koob oo biyo ah waxaad ku dareysaa illaa dhowr qaando oo …
Qoraalkaan ayaa waxaan ka qoray nolosha Soomaalidii Yemen joogi jirtay sidda ay ahayd iyo qaabka ay u noolaani jireen: (Qoraalkaan ayaa ahaa qoraal aan ka qoray waqtigii aan ku sugnaa Yaman) Sidda aan jacenahay Soomaalida ulla jeedka ay u yimadaan Yaman ayaa ah inay ka shaqeystaan. Intooda badan lama dhihi karo yemen waxaa jooga Soomaali si fiican u ladan, laakiin waxaa macquul ah inay joogaan dad iska ladan oo aan dhihi karno wey iska ladanyihiin. Ladnaantooda ayaa ah kuwa wax kasuga dibida xaga wadama Yurubka iyo Ameerika ama wadamada ka dhaqaalaha badan Yaman. Soomaalida intooda badan 95% waa dad usoo tahriiba …
Si sax ah uma cada sababaha keena buufiska, inkastoo aan naqaan waxyaabo qeyb ka geysta jiritaankiisa. Noocyo buufiska ka mid ah waxa loo maleeyaa in leyska dhaxlo oo waxa badan in qof ama wax ka badan oo hal reer ka tirsan ay buufis qabaan. Buufiska waxuu calaamad u noqon karaa dhibaato jireed, sida jiro ama naafanimo. Buufisku waxuu xiriir la yeelan karaa ama uu ka dhalan karaa cudur maskaxeed ah. Hadii laysla barber dhigo wiilasha iyo gabdhaha, Buufiska waxuu inta badan ku dhacaa gabdhaha, inkastoo sababtu aysan cadeyn. Baarayaasha qaarkood waxey soo jeediyeen in gabdhaha ay u nugul yihiin buufiska …
Saan ogsoonahay cudurka buufiska ah waa qeeb ka mid ah waalida, Soomaali hadaanu nahay, waxaanu naqaanaa qof fayoow(miyir qabo) iyo qof waalan oo la xirxiro, intaas wax ka dhaxeeya Soomaali hadaan nahay maba aaminsanin! Sidaa darteed, cudurka buufiska la yiraahdo ayaa qeebihiisa sii batey marka la sii tix-raacey. Maxaad ka taqaanaa cudurka buufiska ah iyo qeebihiisa kala duwan bal. Tusaale ahaan “inuu qof is moodo wax uusan aheyn” waa cudur halis ah! Waxaa jiray nin ismooday inuu yahay xabbad masago ah, inuu qof yahayba iskuma uusan maleen jirin. Nin wuxuu ahaa siddiisa kale caadi u ah oo fayow oo aadan wax …
Nolosha waxay soo martaa xanuuno iyo dhibaatooyin badan markii loo fiiriyo aragtiyada bulshooyinka ku nool caalamka, ayaa ah mid kalla duwan. Sawabtoo ah kalla aragti duwanaanshaha bulshooyinka ayaa ah mid ay ku kalla duwanyihiin casharadii ay ka soo mareen xagga nolosha. Qisadaan waa qiso dhab ah, oo ay ka dhacday mid ka mid ah dalalka carbeed. Waxayna dhexmartay hooyo isha la’ayd iyo wiilkeeda oo markaas lagu qiyaasay 9 illa 10 jir meelahaas. Hooyadaani iyo wiilkeeda waxay ku wada noolaayeen hal meel (1 guri) balse wiilkaan yari aad ayuu u dhibsani jiray in ay timaado hooyadiisa meesha uu taaganyahay, sidda …
Assalamu Calaykum Waraxmatullahi. Kusoo dhawaada waa barnaamijkii cunta karinta. Waxaan rabnaa inaan dadka barno cuno Soomaali casriyeysan. Waa suugo aad u macan oo aad ku cuni karto waxii aad karsatay, haddii ay tahay baasto, bariis ama wax yaallo kalle sidda muufada, sabaayadda ama rootiga. Suugadaan aadka u macaan waa maraq fadhiyo oon bataati lagu dareynino ama bocor markaan joognay wadankeena Soomaaliya waxay dadku aad u isticmaalaan bocorka iyo bataatiga oo ay ku adkeeyaan suugada laakiin midaan wey ka yar duwantahay waxaan isticmaaleynaa digir ey isticmaalaan Hindida. Hindida digirta aad ayey ugu fiicantahay waxaan idin dhihi lahaa aad u isticmaala digirta …